fantsom-baravarankely fampidirana vita amin'ny vy ho an'ny lasantsy miaraka amin'ny rivotra mafana
Home / Applications / Induction Preheating / fantsom-by preheating induction ho an'ny welding
fantsom-baravarankely alefan'entana vita amin'ny vy
Sokajy: Induction Preheating Tags: fantsom-pisehezana preheat ho an'ny welding, induction preheating, fantsom-panafody fampidinana, fantsom-baravarana fampihenana, induction preheating coating, preheating, fantsom-panafody mialoha, fantson-drano mialoha, fantson-drano mialoha ny lasantsy, fantsom-panafody mialoha ny fanoratana
Ity rindranasa fanamafisana induction ity dia mampiseho ny fanafana mialoha ny fantsom-by alohan'ny fametahana miaraka amin'ny herinaratra alohan'ny rivotra MF-25kw (25kW) ary ny coil-cooled. Ny fanindronana mialoha ny fizarana fantsom-boaloboka azo amboarina dia manome antoka ny fotoana fanamafisam-peo haingana kokoa sy ny kalitao tsara kokoa amin'ny fiarahan'ny welding.
fitaovana: Rivotra fampangatsiahana rivotra mangatsiaka ny rivotra MF-25kw
hafanana: Takina amin'ny maripana manodidina 600 ° C +/- 10 ° C (1112 ° F / +/- 50 ° F)
Antsipirihany momba ny fantsom-by vita amin'ny vy:
Ny halavan'ny: 300 mm (11.8 santimetatra)
DIA: 152.40 mm (5.9 santimetatra)
Matevina: 18.26 mm (0.71 inisi)
Ny halavan'ny hafanana: 30-45 mm avy eo afovoany (1.1 - 1.7 santimetatra)
Antsipirihany momba ny vilia vita amin'ny vy vita amin'ny vy.
Habe: 300 mm (11.8 santimetatra) X 300 mm (11.8 santimetatra)
Matevina: 10 mm (0.39 inisi)
Ny halavan'ny hafanana: 20-30 mm (0.7-1.1 santimetatra) avy eo afovoany.
Fanitsiana ny antsipirihany amin'ny fantsom-by vita amin'ny vy:
Haben'ny halavany: 300 mm (11.8 santimetatra) X 60 mm (2.3 santimetatra)
Matevina: 20 mm (0.7 inisi)
Ny mari-pana maharitra 900 ° C (1652 ° F)
Mampiasa ny rafi-panafanan'ny induction cool-MF-25kw izahay izay mamela hamindra mora foana ny rafitra sy ny coil fanafanana ho any amin'ny toerana fantsom-panafody maro samihafa, fa tsy mila manome rafitra fanamafisana rano fanampiny na fantsona.
Ny fanamafisana induction dia manome hafanana maharitra mandritra ny fizotrany. Ny mari-pana mialoha ny hafanana dia azo refesina mora foana amin'ny fitaovana fanaraha-maso temeperature. Ny fomba fanamorana fampidirana dia tena mahomby satria mampihena ny fihenan'ny hafanana izay matetika mitranga mandritra ny fomba fanafanana hafa.